စွန်သဲသောင်ပြင်, Wollongong သဲသောင်ပြင် - ဒူဘိုင်း
အရှေ့အနီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ဒူဘိုင်း
နေရပ်လိပ်စာ: ရုံ Jumeirah သဲသောင်ပြင်ကိုချွတ် Umm Suqeim, Jumeirah သဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်အနီးတွင်လမ်း, - ဒူဘိုင်း - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
ဖုန်းနံပါတ်: +9714317 3999
အများစုမှာဇိမ်ခံ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေ စျေးအကြီးဆုံးရှိပါတယ်ရှိရာဂုဏ်သိက္ခာ Jumeirah အတွက်တည်ရှိသည် အတွက်ဟိုတယ်များ တမြို့။ ဒါဟာကမ်းခြေနှင့်အတူအာဏာများအတွက် vies ထားတဲ့ 11 ကီလိုမီတာအကောင်းဆုံးကမ်းရိုးတန်းသည် ဆစ်ဒနီ၏ , Los Angeles မြို့, Rio de Janeiro မြို့နှင့်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တခြား paradisiacal သဲကမ်းရိုးတန်း။ မည်သည့်ခရီးသွားဧည့်ဖို့ပင်လယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအာမခံပေးသော - ထိုသို့သောစွန်သဲသောင်ပြင်အဖြစ် - သို့သော်ပင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကမ်းခြေတို့တွင်အဟိုတယ်တွေ့ရသည်။
ဒူဘိုင်းကမ်းခြေစွန်သဲသောင်ပြင်၏မြေပုံ Jumeirah ခရိုင်ကပ်လျက်ပါပဲ။ ပထဝီအနေအထားအရကရွက်ကလပ်နှင့်သေးငယ်တဲ့ငါးမျှားရွာအကြားဖြစ်ပါသည်။ အစောပိုင်းကဤအရပ်ဌာနကိုတစ်ဦးတက္ကသိုလ် Woollongong အဖြစ်ကမ်းခြေအနီး Wollongong သဲသောင်ပြင်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုပြီးတာနဲ့ကင်ကင်နှင့်မီးလောင်မှုလုပ်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကတားမြစ်ထားသောခဲ့သည်နေကြသည်။
သဲသောင်ပြင်စွန်သဲသောင်ပြင် - လက်တွေ့မဆိုအခြေခံအဆောက်အဦများမပါဘဲအခမဲ့အတုသဲကမ်းခြေ။ အနီးဆုံးစျေးဆိုင်များနှင့်ဆိုင်များပြီးသားတစ်ဦးလူနေအိမ်အညီအကွာအဝေး၌ရှိကြ၏။ လိုအပ်သောရေစာနှင့်သောက်ရေသင်တို့နှင့်အတူအယူရှိသည်။ တစ်ဦးလေပြင်းအမြဲရှိပါသည်။ စွန်သဲသောင်ပြင် - ဒူဘိုင်းရှိပုံမှန်မဟုတ်သောရာအရပျ။ ဒီလင်းတတွေနဲ့စတင်ငယ်ရွယ်အားကစားသမားများနှင့်ကလေးများ - ဒါဟာမကြာခဏ "ကမ်းခြေလင်းတ" နှင့်ဆုံးသောမကြာခဏဧည့်သည်ဟုခေါ်သည်။
၎င်း၏အမည်ကိုဆိုလိုအဖြစ်မကြာခဏစွန်ဖြင့်လှိုင်းစီးခြင်းပရိတ်သတ်တွေရှိပါတယ်မယ်။ ကမ်းခြေမှာရောက်ရှိလာ, သင်သည်ထိုသူတို့စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ရဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ လမ်းကိုဖြတ်ပြီးကမ်းခြေဆန့်ကျင်ဘက်သငျသညျပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်တန်းပို့ချကနေအနည်းငယ်သင်ခန်းစာတွေကိုငှားရမ်းနိုင်သောနေရာ surfing အတော်ကြာစင်တာများ, ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစငုပ်တစ်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်။ ကဘောလုံးလယ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကမ်းခြေတွင်, သားသမီးတို့အဘို့တစ် trampoline, ဘော်လီဘောများအတွက်အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်း mesh tensioned ။
များစွာသောအခြားအများပြည်သူကမ်းခြေကဲ့သို့ပင်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်။ စွန်သဲသောင်ပြင်တွင်အဘယ်သူမျှမဗော်ယာအဖြစ်အချို့သောအမျိုးသမီးရက်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောစွန်သဲသောင်ပြင်, ရေတိမ်ပိုင်းရေနှင့်အဆင်ပြေဖို့ဝင်ပေါက်အပေါ် Jumeirah ရေအိမ်နီးချင်း၌ရှိသကဲ့သို့။ ရေကူး, နေပူထဲဒီမှာ play အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်နာရီဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါသည်။ အနီးဆုံးကားရပ်နား - paid ။
အဆိုပါလှိုင်းလိုင်းနှင့်အတူများစွာသောအမြင်ကမ်းလှမ်း Burj Al Arab ။ ဒါဟာအရာရှိများမကြာခဏအများပြည်သူကိုင်ဒီကမ်းခြေမြို့ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ ။
တက္ကစီ, ငှားရမ်းထားသောသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်ရောက်ရှိရန်အများဆုံးအဆင်ပြေကမ်းခြေသို့သွားပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ။ တစ်လမ်းညွှန်အဖြစ်, ကမ္ဘာ့စီမံကိန်းရုံးအဆောက်အဦကိုစောင့်ရှောက်။ အနီးဆုံးဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ် သည့်မက်ထရို , Noor ဘဏ်, သမုဒ္ဒရာကနေနှစ်ခုလုပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။
အယ်လ် Mamzar သဲသောင်ပြင်
စွန်ပလွံ Jebel Ali
အမြိုးသမီးမြားအင်ျကြီကိုနွေဦးကို 2014 ခုနှစ်
လက်စထရော - မိန်းမတို့အဘို့စနစ်တစ်ခု
Justin Timberlake နဲ့ Will.I.Am - plagiarists?
မိန်းကလေးများအဘို့အအခန်းထဲမှာ wallpaper - ကောင်းသောဒီဇိုင်းအဘို့အရိပ်၏ရွေးချယ်ရေး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
အဆိုပါ latissimus dorsi တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Keira နိုက်ကြော်ငြာနှုတ်ခမ်းနီများနှင့်အရောင်တင်ဆီ Chanel အတွက်ကြယ်ပွင့်
ပယင်း Heard ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူဖိုင်တွေကို, သူ့ရှေ့နေများ၏ရုံးခန်းထဲကနေထွက်လာသ
Gel whitening သွားများ
သငျသညျမှန်းဆမ7စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အမဲသား aspic ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?